हामीले कुखुराको मासु भन्दै कतै, एन्टिबायोटिक त खाइरहेका छैनाैं ? यस्तो देखायो नेपाल सरकारको अनुसन्धानले ! - nayakhoj24.com
हामीले कुखुराको मासु भन्दै कतै, एन्टिबायोटिक त खाइरहेका छैनाैं ? यस्तो देखायो नेपाल सरकारको अनुसन्धानले !
प्रकाशित मिती December 1, 2017 | nayakhoj24 admin
१५ मंसिर, काठमाडौं । उपभोग्य वस्तुमा मासुको खपत उच्च हुन्छ । त्यसमा पनि कुखुराको मासु अन्य मासुको तुलनामा बढी खपत हुन्छ । तर, अधिकांशको भान्छामा पाक्ने यही कुखुराको मासु सोचेजस्तो स्वच्छ भने छैन ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुखुराको मासुको एक सय ८० वटा नमूना परीक्षण गर्दा एक सय १५ वटामा एन्टिवायोटिकको अवशेष भेटिएको थियो । एन्टिवायोटिकको अवशेष देखिएको मासुको उपभोग मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
कार्यालयका पशु चिकित्सक शशिधर सेढार्इँका अनुसार कुखुरामा रोग लाग्नबाट रोक्न र महामारीको सम्भावित प्रकोप रोक्ने प्रयोजनका लागि एन्टिवायोटिकको प्रयोग गरिन्छ । यसबाहेक सम्भावित रोग र महामारी रोक्न दानामै पनि एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको कार्यालय बताउँछ ।
तर, समुचित ढंगले एन्टिवायोटिकको प्रयोग नगर्दा मासु उपभोग गर्ने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने सेढाईँ बताउँछन् ।
‘मासु उपभोग गरिने कुनै पनि पशु तथा पंक्षीलाई एन्टिवायोटिक लगाउँदा त्यसको स्वास्थ्य अवस्थाको पहिचान गरेर प्रयोग गर्ने तरिका, मात्रा र समयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
एन्टिवायोटिक लगाइए पनि त्यसको निश्चित अवधिसम्म सम्बन्धित पशुपंक्षीको मासु उपभोग गर्नु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने उनी बताउँछन् । तर, कार्यालयकै प्रयोगशाला परीक्षणले भने बजारमा बेच्न राखिएका मासुमा पनि प्रशस्त मात्रामा एन्टिवायोटिकको अवशेष देखिएको देखाउँछ ।
एन्टिवायोटिक प्रयोग गरिएको मासुको उपभोगले शरीरमा हानिकारक असर पर्ने चिकित्सकहरूको भनाई छ । एन्टिवायोटिक प्रयोग भएको खाद्य वस्तुको उपभोगले क्यान्सर जस्तो घातक रोगको जोखिम समेत निम्तिने विज्ञहरूको मत छ ।
शरीरका हानिकारक जिवाणु समूहविरुद्ध प्रयोग गरिने औषधि समूह एन्टिवायोटिक हो ।
एन्टिवायोटिकको प्रयोगमा सर्तकता र न्यूनीकरण गर्न कार्यालयले जैविक सुरक्षा तथा असल सुरक्षा व्यवस्थापन अभ्यास, जिल्लास्तरमा गुणस्तरसम्बन्धि जनचेतना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
खसीबोका, राँगा लगायतका पशुपंक्षीमा पनि यस्तो एन्टिवायोटिक प्रयोग हुन थालेको कार्यालय बताउँछ ।
दूधमा पनि एन्टिवायोटिकको अवशेष
कार्यालयका अनुसार दूधमा पनि एन्टिवायोटिकको अवशेष देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ३७ वटा नमूना परिक्षण गर्दा पाँच वटामा एन्टिवायोटिकको अवशेष देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङका फर्म तथा किसानबाट लिएको गाई र भैंसीको दूधको नमूना परिक्षण गरेको थियो ।
उक्त नमूना परिक्षण गर्दा २ वटा नमूना परीक्षणमा जेन्टामाइसिन बाँकी ३ वटा नमूना परीक्षणमा फ्लोरोकुइनोलोन नामक दुई खालका एन्टिवायोटिक देखिएको कार्यालय बताउँछ ।
गत आवमा मासुमा नै गरिएको यस्तो प्रयोगशाला परिक्षणमा १५ वटा दूधका नमूनामा एन्टिवायोटिक देखिएको थियो । उक्त अवधिमा कार्यालयले कुल २ सय १८ वटा दूधका नमूना परीक्षण गरेको थियो ।-onlinekhabar